Vaovao - Fifandraisana tambajotra tsy miankina ao amin'ny COVID-19
Ny taona 2020 dia tsy maintsy ho taona tsy mahazatra, ny COVID-19 dia namely an'izao tontolo izao ary nitondra loza tsy mbola nisy toa izany tamin'ny zanak'olombelona ary misy fiatraikany amin'ny rehetra manerantany. Raha ny 09 Jul, tranga 12.12 m mahery no voamarina manerantany, ary ny antontan'isa dia mampiseho fa mitombo hatrany izy io. Amin'ity fotoana sarotra indrindra ity, i Kingtone dia niezaka hatrany nanao izay faraherinay mba handresena ny ady amin'ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahaizantsika.
Amin'ity fotoan-tsarotra ity, na ny fanaraha-maso ny fivezivezena marobe, ny fizarana andrim-pitsaboana vonjy maika, na ny fizarana, na ny mpiasan'ny fahasalamana dia mitsabo ireo mararin'ny aretina ao amin'ny toeram-piasana na ny tsindry avy amin'ny politika tsy fahazoana mivezivezy, dia samy nitaky fitakiana avo lenta amin'ny fifandraisana mahomby izy ireo. Ny fomba fifandraisana amin'ny halavirana azo antoka, sy ny fiasana mahomby sy milamina amin'ny tontolo sarotra, dia fanandramana lehibe ary koa malaza amin'ny fifandraisana maika.
Satria miasa ao amin'ny tarika matetika tsy miankina ny tambajotra tsy miankina, betsaka ny tombony azo noho ny tambajotra ampahibemaso mandritra izao fotoan-tsarotra izao.
1. Ny rafitra dia azo antoka sy azo antoka kokoa;
2. Antso vondrona, antso laharam-pahamehana ary fiasa hafa ary tombony ho an'ny tambajotra tsy miankina no mahafeno ny baikon'ny kaomandy sy ny fandaharam-potoana;
3. Mandritra ny ora fiomanana amin'ny feo, ny rafitry ny tambajotra tsy miankina koa afaka mandefa sary, horonan-tsary, toerana ary fampahalalana eo noho eo.
Amin'ny ady atao amin'ny COVID-19, ny fifandraisana amin'ny tambajotra tsy miankina dia lasa fanohanana tena ilaina amin'ny ady amin'ny COVID-19.
Toeram-pitsaboana maro no miankina amin'ny rafitry ny onjam-peo Walkie-talkie hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpiasa mandritra ny COVID-19. Rehefa miatrika ny fiainan'ny olona iray, na ny fahasalamany, ny serasera no zava-dehibe indrindra. FIASANA MAHOMBY Ny serasera dia afaka manampy ny mpiasan'ny fahasalamana hanatsara ny fizotran'ny asany.
Vicky Watson, talen'ny mpitsabo mpanampy, nilaza fa ny walkie talkie dia manampy azy hanatsara ny fahombiazan'ny asa. “Nandritra ny taona maro, nandany fotoana nihazakazaka nanandrana nitady ireo mpiara-miasa izahay, saingy ny walkie talkie dia lehibe tokoa ka tsy mila mihazakazaka mitady olona. Ary ny walkie talkie dia tsy lafo noho ny fitaovana fifandraisana hafa. Bokotra ihany no mila aforantsika; dia afaka miresaka isika. ” Betsaka ny tranga mampiseho ny fomba fiasan'ny fifandraisana maika.
Ny vahaolana kingtone ERRCS (rafitry ny fifandraisana amin'ny Radio Response Communication) dia mampiditra vahaolana isan-karazany amin'ny fifandraisana. Ny vahaolana Kingtone ERRCS dia mikendry ny hametraka baiko maika sy sehatra fikirakirana fampahalalana ho an'ny mpanjifa, izay tsy miankina amin'ny tambajotra ampahibemaso, fandrakofana lavitra (hatramin'ny 20km), ary afaka manome fanaraha-maso, fanairana mialoha, ary fanampiana famonjena amin'ny alàlan'ny fandrosoana. teknolojia.
Amin'izao fotoana izao, ny toe-javatra dia mihatsara isan'andro, izay tsy afa-misaraka amin'ny fanoloran-tena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, mpiasan'ny governemanta, ary mpilatsaka an-tsitrapo, sns. Ao ambadik'izany, tsy afa-misaraka amin'ny fanohanan'ny serasera tambajotra tsy miankina ihany koa izy io. orinasa eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Tsy vita ny valanaretina eran-tany; mbola sarotra ny asa. Na rahoviana na rahoviana ary aiza, mino fa hanefa hatrany ny filan'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina i Kingtone ary hanao izay fara herintsika hanampy amin'izany ady areti-mandringana izany.